Fivavahan-drazana malagasy - Wikipedia
Ny fivavahan-drazana malagasy na ny finoan-drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin' ny Ntaolo malagasy, ka tafiditra ao amin' ny kolontsaina nentin-drazana malagasy, sady mifototra indrindra amin' ny fivavahana amin' ny Zanahary sy ny fanahin' ireo razana efa maty. Miovaova isam-paritra ny endriky ny fivavahan-drazana malagasy noho ny fisian' ny singa hafa manampy ireo efa voatanisa etsy aloha ireo.
Ny Malagasy mandala ny fivavahana nentim-paharazana dia miavavaka amin' andriamanitra sy amin' ny razana. Mihoatra ny 52 %n' ny mponina no manaraka ny fivavahan-drazana izay fivavahana manantitra ny fifandraisan' ny velona sy ny maty (Razana).
Ireto avy ny zavatra inoan' ny Malagasy mandala ny fivavahan-razana ho manana ny hasiny: ny sampy, ny ody, ny hazomanga, ny vatolahy, ny karazan-kazo sasany, ny karazam-biby sasany (toy ny omby). Ireto ny zavatra tsy hita maso nefa inoany fisiana: ny Zanahary, ny fanahin' ny razana, ny kalanoro, ny tromba, ny avelo, ny matoatoa. Mba ho fanajana an' ireo fanahy ireo dia manatanteraka fanatitra sy sorona, ny Ntaolo malagasy. Ho fanajana ireo havany efa maty dia manao famadihan-drazana na manao asa lolo ny Malagasy.
Ny misahana ny fandraharahana ny fifandraisana amin' ireo fanahy tsy hita maso ireo dia ny mpisorona, ny mpitan-kazomanga, ny ombiasa sy ny maro hafa koa. Inoan' ny Ntaolo malagasy ho manana hery miafina manimba ny mpamosavy. Manatona mpanandro koa ny Malagasy, izay mino ny fisian' ny atao hoe vintana, raha hanao zavatra mba hahaizany ny fotoana mety anatanterahany ny zavatra kasainy hatao sy ny fombafomba tokony hatao, ka mety misy ny ala faditra. Manatona mpisikidy koa ny Ntaolo malagasy raha te hahafantatra ny marina ny amin' ny zava-mitranga eo amin' ny fiainany. Ao koa ireo manatona olona misy tromba.
1 Ny olombelona
1.1 Ny fiaviany
1.1.1 Noarîn' i Zanahary ny olombelona
1.1.2 Tokana ny razambe voalohany nipoira' ny olombelona
1.2 Ny fiainany
1.2.1 Tsy mahavita tena ny olombelona
1.2.2 Samy manana ny anjarany ny olombelona
1.3 Toetra ara-panahin' ny olombelona
1.3.1 Ny avelo
1.3.2 Ny ambiroa
1.3.3 Manana fanahy hiaina aorian' ny fahafatesan' ny vatana
2 I Zanahary sy ny zanahary
2.1 Ny finoan' ny Ntaolo an' i Zanahary
2.1.1 Mpahary i Zanahary
2.1.2 Mandahatra amin' ny zava-drehetra i Zanahary
2.2 Ny fivavahana amin' i Zanahary sy ny fatahoran' ny Ntaolo azy
3 Ny razana
3.1 Ireo zavatra aorina enti-maneho fanajana ny razana
3.1.1 Ny fasana
3.1.2 Ny hazomanga
3.1.3 Ny aloalo
3.1.4 Ny tsangambato
3.2 Ny fivavahana amin' ny razana
3.2.1 Ny fanajana ny fady
3.2.2 Ny fanaovana sorona
3.2.3 Ny fanaovana famadihana
3.2.4 Ny fankalazana ny fitampoha
3.3 Ny fisehoan' ny razana sy ny fanatrehany
3.3.1 Ny fisehoan' ny razana amin' ny alalan' ny nofy
3.3.2 Ny tsindrimandry
3.3.3 Ny fanatrehan' ny razana amin' ny alalan' ny tromba
3.3.4 Ny fisehoan' ny angatra
3.3.5 Ny fambara
4 Ireo zavatra sy fanahy hafa inoan' ny Ntaolo malagasy fa misy
4.1 Ny fanahim-bazimba
4.2 Ny kalanoro
4.3 Ny kokolampo
4.4 Ny tromba
5 Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina
5.1 Ireo zavatra hita maso manan-kasina manokana
5.1.1 Ny sampy
5.1.2 Ny ody
5.1.3 Ny faditra
5.2 Ireo fanao ahafahana mamanta-javatra
5.2.1 Ny fanandroana
5.2.2 Ny sikidy
5.2.3 Ny fanambaràna ny hevitry ny nofy
6 Ny toetra sy toeran' ny olombelona sy ny zavaboary
6.1 Ny hasina
6.2 Ny vintana
7 Ny fivavahan-drazana malagasy sy ny fivavahana hafa
7.1 Ny fivavahan-drazana malagasy sy ny kristianisma
Noarîn' i Zanahary ny olombelonaHanova
Mino ny Ntaolo malagasy fa noarîn' i Zanahary ny olombelona. Mino ihany koa izy fa tsy mitsahatra amin'ny fahariana ny fifandraisan' i Zanahary sy ny olombelona fa mitohy amin' ny alalan' ny fanampiany ny mpanao soa sy ny fanamelohany ny ratsy ataon'ny olombelona.
Tokana ny razambe voalohany nipoira' ny olombelonaHanova
Na dia fantatry ny Ntaolo malagasy fa samy manana ny fihodirany sy ny fiteniny sy ny fombany ny olombelona, dia hita taratra eo amin'ny fedrà sy ny oha-pitenenan'ny Ntaolo ny fiheverana ny olombelona rehetra ho nipoitra tamin' ny razambe tokana. Hoy ny ohabolan' izy ireo manao hoe:
"Ladim-boatavo ny olombelona ka raha fotorana dia iray ihany".
Tsy mahavita tena ny olombelonaHanova
Mila ny fitahiana sy ny fiarovan'ny fanahy hafa ankoatra an' i Zanahary izay lavitra loatra ny Ntaolo malagasy, ka ny voalohany amin' ireo dia ny fanahin' ny razana.
Samy manana ny anjarany ny olombelonaHanova
Samy manana ny anjarany avy amin' i Zanahary ny olona na ny vondron' olona tsirairay. Ny anjara dia zavatra soa na ratsy inoana ho avy amin' Andriamanitra. Ny anjara dia ilazana ny zavatra tsy azo ihodivirana sady lehibe toy ny loza, ny fahafatesana, sns. Mifandray ihany ny anjara sy ny vintana sy ny lahatra, ka izany no ahenoana ny hoe "anjara vintana".
Hoy ny Ntaolo:
Anjaran'ny mpanan-karena ny milamin-tokantrano, fa tsy mba anay malahelo.
Manana anjara ratsy, toy ny fantaka: manompo, vao vaky loha.
Tanalalahy misarotro mainandro: manakona ny anjara-masoandron’ ny tena.
Tsy mandidy alohan'Andriamanitra aho, fa izay zara-vintana lolohavina.
Tsy misy nivavaka niankandrefana, fa samy nianavaratra ihany; fa ny harena mila vintana, ka raha tsy anjara, tsy tonga.
Toetra ara-panahin' ny olombelonaHanova
Ny teny hoe fanahy dia ampiasaina amin' ny fiteny malagasy ankehitriny, izay azo avy amin' ny fivavahana kristiana, hilazana zavatra manan-tsitrapo nefa tsy mety hitan' ny olombelona (fanahy, ohatra Andriamanitra, ny angatra, sns). Tamin' ny Ntaolo malagasy kosa, ny fanahy dia zavatra na toetra ao amin' ny olombelona izay mampahatsiaro tena azy, mahatonga azy hieritreritra, sady mampiavaka ny olona amin' ny biby amin' ny lafiny fitondran-tena.
Ny avelo dia karazana fanahy ambanimbany tsy dia maharitra ela Ioatra aorian' ny fahafatesana, izay azo heverina ho fototry ny hery mahavelona fotsiny ny olombelona na ny biby.
Ny ambiroa dia singa ara-panahy izay inoan' ny Ntaolo fa maharitra aorian' ny fahafatesana. Mety hialan' ny ambiroany vetivety ny olona iray ka hanjary ho verivery hevitra na verivery tadidy. Miverina ao amin' ny olombelona ihany ny ambiroa rehefa avy niala tao. Ny tsy fiverenan' ny ambiroa dia miteraka fahafatesana. Azo atao araka izany ny manala ambiroa na mampody ambiroa ny olona iray.
Manana fanahy hiaina aorian' ny fahafatesan' ny vatanaHanova
Inoan' ny Ntaolo malagasy fa tsy maty miaraka amin' ny vatana ny fanahin' ny olombelona fa lasa afaka manohy ny fisiany ivelan' ny tontolon' ny velona. Mety miseho ao amin' ny tontolon' ny velona ny fanahin' ny razana, ka izany no mampisy ny tromba sy ny angatra sady itandremana ny zavatra nameperany.
I Zanahary sy ny zanaharyHanova
Andriamanitra na Zanahary, amin' ny Ntaolo malagasy dia fanahy tsy misy toa azy, izay ninoany fa nahary izao rehetra misy izao, ka isan' izany ny olombelona. Maro koa ireo zavatra ataon' ny Ntaolo malagasy hoe zanahary na andriamanitra.
Ny finoan' ny Ntaolo an' i ZanaharyHanova
Mpahary i ZanaharyHanova
I Zanahary dia andriamanitra monina any an-danitra ao amin' ny fedrà malagasy. Heverina ho andriamanitra mpahary. Rehefa maty ny olombelona dia miakatra any an-danitra, any amin' i Zanahary, ny fanahiny.
Mandahatra amin' ny zava-drehetra i ZanaharyHanova
Ninoan' ny Ntaolo malagasy fa i Zanahary no mandahatra sy mandidy ny zavatra rehetra. Ny lahatra dia "fitondran' Andriamanitra na ny vintana mihatra amin' ny olombelona" . Izao ny filazan' ny Ntaolo malagasy momba ny lahatra:
Ny mazoto no nambinina ka ny kamo avy koa no milaza ho miandry lahatra.
Ny fivavahana amin' i Zanahary sy ny fatahoran' ny Ntaolo azyHanova
Andriamanitra lavitra ny olombelona i Zanahary ka atahorany, tsy antsoiny raha tsy amin' ny antony manokana, na raha tsy matahotra na tsy manana razana iraisana aminy ny olona mifaninona amin' ny tena. Hita taratra amin' ny ohabolana sy ny fomba fiteny malagasy izany finoan' ny Ntaolo an' i Zanahary izany. Matetika dia tsy maintsy ampiarahina amin' ny fitokavana ny razana ny fiantsoana an' i Zanahary, azo antsoina tsy misy fanononana an' i Zanahary anefa ny razana.
Ny razana dia ireo olona efa maty nefa heverina ho hery mpanao soa eo amin' ny fiainan' ny velona, izay heverina fa afaka mitahy sy miaro ny olona mbola velona izay ankasitrahany na manasazy izay olona tsy ankasitrahany.
Ireo zavatra aorina enti-maneho fanajana ny razanaHanova
Ny fasana dia ilay zavatra naorina mba hiarovana ny toerana nandevenana na nanafenana ny maty. Io no toerana hita maso izay sady mampahatsiahy ny fahafatesana no mampifandray ny tontolon' ny velona sy ny tontolon' ny maty koa. Ao no itoeran' ny razana amin' ny androny sisa rehetra.
Ny hazomanga dia tsato-kazo roa na telo mifanakaiky, atsatoka amin' ny toerana iray, izay atao hanatanterahana fianianana na sorona na fitsofan-drano. Ny mpitan-kazomanga (izay atao hoe mpisorona koa) no miandraikitra ny fikarakarana ny zavatra atao eo amin' ny hazomanga. Famantarana ny maha iray firazanana na iray fianakaviana ny hazomanga.
Ny aloalo dia zavakanto vita amin' ny hazo, misy sary vaosokitra maneho ny sombin-tantaram-pianinana, na ny zavatra tian' ilay olona maty fony fahavelony, na ny fananan-karenan' ny maty (fananana omby indindraindrindra), na ny toerany teo amin' ny fiarahamonina. Eny amin' ny fasana no ametrahana ny aloalo any amin' ny faritra Mahafaly sy amin' ny faritra Androy.
Ny tsangambato dia vato aorina ho solom-pasan' ny olona tsy hita faty, maty tamin' ny ady na tamin' ny antony hafa. Misy koa ny miantso azy io hoe orimbato na vatolahy. Arakaraka ny faritra eto Madagasikara dia mety tsy hitovy hevitra ireo teny telo ireo. Ny tsangambato koa dia enti-manamarika ny zava-nitranga lehibe teo amin' ny tantaran' ny fanjakà-mpanjaka na ny foko iray.
Ny fivavahana amin' ny razanaHanova
Ny fivavahana amin' ny razana dia fivavahana amin' ny fanahin'ny maty. Manam-pifandraisana hentitra amin' ny fahafantarana ny tetiaran' ny taranaka tany aloha ny fivavahana amin' ny razana.
Ny fanajana ny fadyHanova
Ny fady dia ireo zavatra raràna tsy azo tanterahina araka ny fepetra napetraky ny fomba amam-panao. Araka ny finoana dia vokatry ny hery tsy hita maso sady mifandray amin’ ny fivavahana amin' ny razana ny fady. Izay manota fady dia heverina ho maloto sy manohintohina ny filaminana ara-panahin' ny fiarahamonina. Aseho amin' ny alalan' ny fanajana ny fady koa ny fivavahana amin' ny razana. Inoana fa ny fanehoam-panajana ny razana amin' ny alalan' ny fanajana ny fady dia mahatonga ny razana hitahy ny velona.
Ny fanaovana soronaHanova
Ny sorona dia fomba tanterahina hanomezana haja na ho enti-mifona na mangata-pitahiana amin' i Zanahary na ny razana, ka matetika famonoana biby toy ny omby no atao. Ny mpisorona na ny mpitan-kazomanga no mitarika izany fomba izany, izay atrehin' ny sokajin' olona voakasika na ny olona rehetra, arakaraka ny zavatra mitranga.
Ny famonoana omby atao sorona no fomba anehoana ny fanajana ny razana na ampitsaharana ny fahatezeran' izy ireo. Azo atao koa ny maneho fanajana ny razana amin' ny alalan' ny fanidinana toaka avy amin' ny tavoahangy vao nosokafana, atao amin' ny zoro avaratra-atsinanan' ny trano mba hanomezana ny anjarany.
Ny fanaovana famadihanaHanova
Tsapa amin' ny alalan' ny fomba fanao momba ny fasana ny fivavahana amin' ny razana, ka ny any afovoan-tany dia manatanteraka ny famadihana. Ahatsiarovana ireo razana sy ivorian' ny fianakaviana sy ny mpiara-monina ny famadihana ary anaovana lanonana.
Ny fankalazana ny fitampohaHanova
Ny fitampoha dia fampandroana ireo sisan-javatra avy amin' ny vatan' ny mpanjaka efa maty, izay tanterahin' ny Malagasy sakalava any amin' ny faritra Menabe, isaky ny dimy taona mandritra ny fito andro, mba hahatsiarovana ireo mpanjaka sakalava.
Ny fisehoan' ny razana sy ny fanatrehanyHanova
Ny fisehoan' ny razana amin' ny alalan' ny nofyHanova
Rehefa te hiresaka amin' ny velona ny razana dia matetika miseho amin' ny nofy, ka amin' izany no ilazany ny hafatra tsy voalazany fahavelony na anamafisany izany, amin' izany koa no anambaràny ny zavatra tiany hatao aminy na tsy tiany hatao aminy, amin' izany no ilazany ny tokony hatao amin' ny fananana na taranaka navelany.
Ny tsindrimandry dia ny fampidirana hevitra ataon' ny razana ao an-tsain' ny olona mba hahalalany ny tokony hatao na ny tokony hambara amin' ny velona. Tsy miseho ny fanahin' ny razana mandritra izany fa ny eritreritr' ilay olona voatsindrimandry no mahatsapa zavatra. Ninoan' ny Ntaolo fa afaka manindry mandry koa i Zanahary na ny zanahary.
Ny fanatrehan' ny razana amin' ny alalan' ny trombaHanova
Ny tromba dia fanahin' ireo mpanjaka tany aloha izay mbola manohy ny fanapahany amin' ny velona amin' ny alalan' ny findramany ny tenan' ny olona iray mbola velona. Miteny amin' ny alalan' io olona misy tromba io ny fanahin' ny mpanjaka. Any amin' ny faritra sakalava no tena ahitana izany nefa miely eran' ny Nosy ihany koa izany finoana izany. Antsa sy tehaka aman' amponga sy angorodao izay atao handihizan' ilay olona misy tromba sady hitokavana ilay fanahy mba hiditra ao aminy.
Ny fisehoan' ny angatraHanova
Ny angatra na matoatoa dia fisehoan' ny fanahin' ny olona maty amin' ny velona, indrindra ny fanahin' ny razana tsy nisy mpikarakara na tsy mankasitraka ny fomba fandraisan' ny velona azy. Tsy tian' ny Malagasy ny mahita na mifanena amin' angatra. Ny fisian' ny angatra dia mety ho tsapa amin' ny fahatsiarovana hatsiaka hafahafa na fitambesaran' ny vatana na ny entana tampoka na amin' ny fahitana afo (izay atao hoe "afon' angatra" na "afon-dolo"). Mety hampijaly ny olona matory ny angatra amin' ny alalan' ny fanindriany azy sy ny fampitahorany azy. Misy ny olona izay inoana fa mahay mamoha angatra hiresaka amin' ny havany.
Inoan' ny Ntaolo malagasy koa ny fisian' ny fambara izay tsy inona fa zava-mitranga tsapan' ny olona (hita maso na ren' ny sofina sns) ka manampy azy hahalala mialoha ny zavatra hitranga amin' ny hoavy akaiky na lavitra. Mety ho zava-tsoa no hitranga nefa matetika dia zava-dratsy no ahenoana ny teny hoe fambara, toy ny hoe fambara loza. Tsy voatery ho ny razana ihany no mandefa fambara fa mety ho i Zanahary na ny fanahy hafa rehetra.
Ireo zavatra sy fanahy hafa inoan' ny Ntaolo malagasy fa misyHanova
Ankoatra an' i Zanahary sy ny razana dia maro ireo fanahy tsy hita maso inoan' ny Ntaolo fisiana.
Ny Vazimba dia lazain' ny lovantsofina fa olona fohy nonina tany afovoan' ny Nosy sady nivavahan' ny olona ny fasany taty aoriana. Misy anefa ireo milaza fa olona tahaka ny Malagasy ankehitriny ihany ny Vazimba (ka soratana hoe Vazimba). Atao hoe vazimba ihany koa ny fanahiny sy ny fasany. Amin' ny maha olombelona ny Vazimba dia inoan' ny Ntaolo ny fitohizan' ny fahaveloman' ny fanahiny, ka izany no antony anajana ny fasany.
Ohabolana momba ny Vazimba:
Harem-bery foana, toy ny menaka ahoso-Bazimba.
Misakaiza amim-Bazimba malahelo; ka ny akoholahy lany, ny fitahiana tsy misy.
Miteny irery toy ny miresaka amim-Bazimba
Ny adala no manitsa-Bazimba, ka ny lehibe no aolanolany.
Ny kibobo no mena maso dia miresaka amim-Bazimba.
Ny kalanoro dia zavamananaina mitovitovy amin' ny olona fa kely madinika sy fohy izay mivelona any anaty ala. Malaza ho mahay fanafody ny kalanoro. Ankehitriny dia inoan' ny olona fa azo tezaina ny kalanoro mba hampanan-karena.
Ny kokolampo na koko dia zavamananaina mitovitovy amin' ny olona, karazan' ny kalanoro. Mety ho tsara fanahy na ho ratsy fanahy ny kokolampo. Tsy hita maso ny kokolampo nefa hita ny asany sy ny vokatr' izany. Tiany ny miompy akoho mainty na osy mainty, dia ireo osy na akoho omen' ny olona mangataka fitahiana aminy na mangataka fifonana aminy. Tian' ny kokolampo ny vilany vy sy ny arina. Raha mitsitokotoko mitambatra toy ny nirandrana ny volon' ny zazakely (izay tsy nokasihin-drano sady tsy nohetezana) dia lazaina fa noradranin-koko.
Ny tromba dia ny fanahin' ny razana (indrindra ny an' ireo mpanjaka taloha) sy ny fipetrahan' izy ireo ao amin' ny olona iray mbola velona izay lazaina fa misy tromba.
Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasinaHanova
Ireo zavatra hita maso manan-kasina manokanaHanova
Ny sampy dia tapa-javatra natambatra azo tsapain-tanana izay inoana fa mananan-kasina, izay mihazona ny fahasalamana sy ny fahavokarana ary ny fandriam-pahalemana. Matetika ny mpanjaka no lazaina fa manana sampy. Ninoana ho miaro ny mpiara-monina manontolo ny sampy. Amin' ny ankapobeny dia tahirizina amin' ny toerana manokana ka tsy afindrafindra ny sampy, nefa misy ireo izay azon' ny tompony enti-madehandeha.
Ny ody dia tapa-kazo na tapa-javatra hafa izay ninoan' ny Ntaolo fa manankery hitondra ny soa sy hiaro amin' ny loza. Karazana sampy isam-batan' olona ny ody, ka ninoana fa miaro na manome hery ny olona mitondra na miravaka azy. Ny olona avy amin' ny saranga rehetra dia afaka mitahiry ody. Mety ho tsara ny ody (tahaka ireo izay ampiasain' ny ombiasa mpanasitrana), nefa koa mety ho ratsy (tahaka izay ampiasain' ny mpamosavy).
Ny faditra dia zavatra ratsy ahodin' ny sasany amin' ny tena na momba ny tononandro ka tokony ho sakanana na esorina amin' ny alanan'ny fanalana faditra. Ny karazam-borona (toy ny akoholahy mena, ny akoho mainty tokam-bolo sns) na ny ondry mazava loha, na ny singa avy amin' ny zavamaniry (toy ny tapakazo, ny bozaka, ny ahitra) na zavatra hafa (toy ny orana, sns) dia azo ampiasaina hanalana faditra. Atao ny ala faditra raha toa ka misy zavatra mifanipaka, toy ny vintan' ny olona roa tsy mifanentana fa mifanohitra.
Ireo fanao ahafahana mamanta-javatraHanova
Ny fanandroana dia fandinihana sy fampiharana ny fifandraisan' ny fotoana ahaterahan' ny olona iray na ny fotoana isehoan' ny zavatra iray ampifandraisina amin' ny toerana sy ny toetran' ny Volana sy ny kintana ary ny masoandro sy zavatra hafa toy ny zoro sy ny lafin-tany. Ny vintana no singa manan-danja indrindra amin' ny fanandroana. Tsy ny fotoana ihany no sahanin' ny fanandroana malagasy fa ny erana sy ny zavaboary hafa koa.
Ny sikidy dia fahaizana mikirakira voan-javatra (voam-pany, vaoan-tsaramaso, voan-kily, sns) na tapa-javatra maro (ahitra, rantsan-kazo, sns) na fasika izay ahalalana ny zavatra tsy atrehina (ny lasa sy ny hoavy indrindra indrindra) na manazava ny antony nisian-javatra iray.
Ny fanambaràna ny hevitry ny nofyHanova
Misy koa olona inoan' ny mpiara-belona fa mahay manambara ny hevitry ny nofy. Matetika dia ny ombiasa no misahana izany asa fanambaràna ny hevitry ny nofy izany.
Ny toetra sy toeran' ny olombelona sy ny zavaboaryHanova
Ny hasina dia hery tsy hita maso ananan' ny olombelona sy ny zavaboary hafa izay afaka manova ny fiainan' ny olombelona manam-pifandraisana amin' izay manana azy (izany hoe manana hasina). Misy sokajin' olona izay heverina fa manan-kasina kokoa noho ny ankamaroan' ny olombelona, dia ny andriana, ny mpanandro sy ny mpisikidy, ary ny mpitan-kazomanga. Inoan' ny Ntaolo malagasy fa avy amin' i Zanahary sy ny razana ny hasina. Mety ho very na ho lefy ny hasina raha misy ny ota fady mahakasika izany. Misy koa fomba atao mba hampanan-kasina ny zavatra iray, ohatra ny fanasinana ny sikidy.
Inoan' ny Ntaolo malagasy fa mamaritra ny toetra sy ny hoavin' ny olona ateraka na ny zavatra atao ny vintana nefa azo ovana izany amin' ny alalan' ny fanalana vintana raha ratsy ka atahorana hitera-doza io vintan-dratsy io. Ilazana ny anjara soa na ratsy miankina amin' ny tonon' andro nahaterahana ny vintana.
Ny fivavahan-drazana malagasy sy ny fivavahana hafaHanova
Ny fivavahan-drazana malagasy sy ny kristianismaHanova
Hatramin' ny fiandohan' ny fivavahana kristiana teto Madagasikara no nisian' ny fifanandrenana teo aminy sy ny fivavahan-drazana malagasy. Ny Kristiana milaza fa asan' ny devoly na asan' ny maizina ny fivavahan-drazana malagasy fa ny mpandala ny fivavahan-drazana kosa miampanga ny Kristiana ho mpanimbazimba ny zavatra navelan' ireo nahitany masoandro.
Teo amin' ny tantara dia i Ranavalona I no nalaza tamin' ny fiarovana ny fivavahan-drazana manoloana ny kristianisma izay niteraka ny fanenjehana mamaivay ny mpanaraka ity farany. Rehefa maty Ranavalona I dia nahazo laka amin' izay ny fivavahana kristiana.
Miseho ny fanoheran' ny Kristiana ny fivavahana amin' ny sampy, ny fivavahana amin' ny razana, ny finoana ny tromba sns, indrindra eo amin' ireo fiangonana prôtestanta (ao amin' ny sehatry ny fifohazana) sy evanjelika.
Fivavahana amin' ny razana
Fifohazana (kristianisma malagasy)
↑ "Avelo", in Rajemisa-Raolison, Rakibolana malagasy, 1985.
↑ "Lahatra"; in Regis Rajemisa-Raolisona, Rakibolana malagasy, 1985.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahan-drazana_malagasy&oldid=1044243"
Dernière modification le 6 Martsa 2022, à 06:32
Voaova farany tamin'ny 6 Martsa 2022 amin'ny 06:32 ity pejy ity.